को'रोनाको खोपमा वडाध्यक्ष र स्वास्थ्यकर्मीको रजाई, कुन ठाँउमा भयो यस्तो ? -
को’रोनाको खोपमा वडाध्यक्ष र स्वास्थ्यकर्मीको रजाई, कुन ठाँउमा भयो यस्तो ?
वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिकामा लक्षित समूहको लागि ल्याइएको को’रोना विरु’द्धको खोप अन्य व्यक्तिहरुलाई लगाइएको पाइएको छ ।
महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा साउन ११ र १२ गते गरी दुई दिनसम्म लगाइएको को’रोना विरु’द्धको खोप लक्षित समूह बाहेकलाई लगाइको पाइएको हो। दुई दिनसम्म महानगरका स्वास्थ्य चौकीहरुमा यहाँका स्थानीयहरुलाई को’रोना विरु’द्धको अमेरिकी जोन्सन कम्पनीको खोप लगाइएको छ ।
महानगरपालिकाले नै सूचना जारी गरेर कोरोना विरु’द्धको जोन्सन कम्पनीको खोप ५० वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने जनाएको थियो । यस्तै ‘क’ र ‘ख’ वर्गका पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्ता भएका व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मीहरुलाई खोप लगाउने भनिएको थियो ।
जसका लागि महानगरको ३२ वटै वडाहरुको स्वास्थ्य चौकीमै खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, महानगरका अधिकांश वडाहरुमा लक्षित समूह बाहेकका व्यक्तिहरु वडाध्यक्षका आसेपासे, नातागोताका व्यक्ति, स्वास्थ्य चौकीका ईञ्चार्जहरुको चिनेजानेकाले समेत लगाएका छन् । उनीहरु खोप लगाउने लक्षित समूह बाहेकका व्यक्तिहरु रहेको पुष्टि भएको छ।
खोप लगाएका लक्षित समूहका व्यक्तिहरुले समाजिक सञ्जालमा खोप कार्ड नै राखेर खोप लगाएको देखाएका छन् । यसले महानगरमा लक्षित समूहको लागि आएको खोप अरुलाई नै लगाइएको पुष्टि भएको छ । लक्षित समूहमा पर्ने महानगरका अधिकांश स्थानीयहरुले भने खोप केन्द्रमा धाउँदासमेत खोप लगाउन नपाएको बताएका छन् ।
महानगरको वडा नम्बर ३० लालपर्सा टोलमा त्यहाँ रहेको स्वास्थ्य चौकीका ईञ्चार्ज र वडाध्यक्षको मिलेमतोमा लक्षित समूहको लागि आएको को’रोना विरु’द्धको खोप अन्य व्यक्तिहरुलाई लगाइएको छ । उक्त वडामा रहेका व्यक्तिहरुले लक्षित समूहमा नपर्ने भएपनि खोप लगाएको र खोप कार्ड समेत समाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । उनले आफू सहित आफ्नो श्रीमतीले समेत खोप लगाएका बताएका छन् ।
खोप बढी भएकाले अन्य व्यक्तिहरुलाई खोप लगाइएको वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष अमा’नत अन्सारीले बताए । खोप फिर्ता नहोस् भनी बाँकी रहेको खोप मात्रै अन्यलाई लगाइएको उनले दावी गरेको खबर देशसञ्जार अनलाईनले छापेको छ ।
को’रोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बडदै, २४ घण्टामा संक्रमित र निको कति भए ?
२४ घण्टामा मुलुकभर को’रोना संक्र’मित नयाँ कति थपिए ? र निको भएर घर कति फर्के ?
आज देशभर नयाँ को’रोना संक्र’मित कति थपिए ? र निको कति भए ?